Fandraisana andraikitra ara-tsosialy | Martech Zone
Talata, Martsa 19, 2013 Talata, Martsa 19, 2013 Amol Dalvi
Ny ankamaroan'ny mpivarotra dia mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fampiasana media sosialy hifaneraserana amin'ny mpanjifa, ny fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika ary hiteraka fitarihana, saingy orinasa maro no mbola miady mafy. Ahoana ny fomba hampiasanao prospect amin'ny sehatra manokana, hanehoana ny lanjan'ny orinasanao ary hanovana azy ireo ho mpanjifa?
Ho an'ny orinasa dia misy lanjany kely ny fananana mpanaraka Twitter an'arivony raha tsy misy mividy avy aminao. Miankina amin'ny fandrefesana valiny ary hamaritana mora foana raha mandeha ny zavatra ataonao.
Ao amin'ny Right On Interactive dia mifantoka amin'ny fitadiavana ireo fomba tsara indrindra handrefesana ny fahombiazana izahay, ary anaovanay izany amin'ny alàlan'ny fanoratana ambaratonga maro samihafa amin'ny firotsahana. Ny moteur scouteur Right On dia manara-maso ny hetsika sy ny fifandraisana rehetra manodidina ny marikao. Manamarika ny firosoana ara-tsosialy izahay.
Andao jerena ohatra ny mailaka. Mandefa ny fanantenanao ny mailakao amin'ny mailaka isam-bolana. Izay manokatra azy dia mahazo teboka. Raha tsindrio ny rohy iray amin'ny mailaka dia teboka hafa izany. Raha mitsidika ny tranokalanao izany dia mahazo isa bebe kokoa izy ireo. Ireo mpandray manana isa betsaka indrindra dia ireo izay mirotsaka an-tsehatra indrindra.
Fampidirana Twitter vaovao an'ny Right On mitondra an'io hevitra io ihany any amin'ny media sosialy.
Amin'ny alàlan'ny fanarahan-dia ireo hetsika rehetra mitranga manodidina ny kaonty twitter an'ny mpivarotra dia afaka misintona an'io hetsika io izahay ao amin'ny motera fanaovana sikotra Right On ary manome lanja ny haavon'ny fifamatorana isan-karazany.
Maninona no tsy mitovy ny isa ara-tsosialy an'ny ROI
Betsaka amin'ireo vokatra Twitter amin'izao fotoana izao no misy vokatra fanamafisam-peo. Mandefa zavatra ao amin'ny kaonty media sosialy ianao ary manantena fa hahazo retweet izany mba hahatratra ny mpihaino marobe. Mitovy amin'ny fametrahana takelaby eny amin'ny arabe iny ary manantena olona maro hahita azy.
Ao amin'ny Right On Interactive dia mifantoka amin'ny isa sy ny fandraisana anjara izahay fa tsy amin'ny fanamafisana. Tianay ny mamantatra sy manome isa ireo famantarana mividy. Amin'ny alàlan'ny fanampiana ny mpanjifa hahatakatra ny ezaka ezak'izy ireo amin'ny haino aman-jery sosialy dia ho hitan'izy ireo haingana izay tetika mahomby indrindra.
Ny scoring social an'ny ROI dia azo ovaina tanteraka
Ny fampidirana dia misintona ny angona rehetra manodidina ny kaonty Twitter toy ny mpanaraka vaovao, ny marika miresaka, ny retweet ary ny hafatra mivantana. Ny iray amin'ireto hetsika ireto dia azo omena teboka fandraisana anjara, ka ny mpivarotra no mifehy ny isa. Namboarina tanteraka izy io.
Ohatra, ny mpanaraka vaovao iray dia mety hahazo isa iray. Ny retweet dia mety mitentina roa. Raha mandefa mivantana ny kaonty izay mety mitentina 10 isa ny prospecta. Ireo mpivarotra dia afaka manome lanja ireo hetsika fandraisana anjara izay heverin'izy ireo fa manan-danja sy mandaitra indrindra.
Famantarana ny fitarihana mafana amin'ny alàlan'ny scoring social ROI
Ny fampidirana Twitter vaovao dia endri-javatra mahazatra an'ny Rindrambaiko scoring an'ny Right On. Io dia ahafahanao mamadika ireo mpanaraka tsy fantatra anarana ho lasa fifandraisana tena izy ao amin'ny tobim-baovaon'orinasa. Ny fampifandraisana ny fifandraisan'ny orinasa Twitter sy ny angon-drakitra dia mamela ny ekipa marketing hampiasa tsara kokoa ny lafiny rehetra amin'ny fifamatorana manodidina ny marika.
Ny iray amin'ireo fiasa mahaliana kokoa dia manampy ny mpivarotra hamantatra fitarihana mafana, dia ireo mpampiasa izay mamorona firotsahana sy fifanakalozana betsaka ao anatin'ny fotoana fohy. Amin'ny famaritana haingana ireo mpampiasa ireo dia azonao atao ny mampita ny fitarihana mafana ho an'ny ekipa mpivarotra eo noho eo.
Fomba iray hafa fotsiny ny Right On Interactive dia ny fanampiana ireo orinasa manararaotra indrindra amin'ny hetsika media sosialy.
Right On Interactive no mpanohana automatique marketing ho an'ny Martech Zone.
Tags: isa amin'ny facebookscoring firakascoring mifandrayisa azo amin'ny prospectmahitsy amin'ny interactiveisa ara-tsosialyisa amin'ny twitter